Ikhosi kaGoogle Earth: ukusuka kwisiseko ukuya phambili -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi kaGoogle Earth: ukusuka kwisiseko ukuya phambili
Google Earth sisoftware eza kuguqula indlela esibona ngayo umhlaba. Amava okujikeleza indawo xa kodwa enendawo yokusondela kuyo nayiphi na indawo emhlabeni, ngokungathi besikhona.
Le yikhosi yohlobo oluthile, ukusuka kwiziseko zokuhamba uye ekwakheni ukhenketho lwe-XNUMXD olukhokelwayo. Kule nto, ingcali evela kwisayensi yezentlalo, ubuntatheli okanye utitshala uya kuvula iingqondo zabo ukuze basisebenzise kakuhle esi sixhobo ukwenza intetho ebhetele. Unokufumana izimvo ezintsha zokuzivocavoca kunye neeprojekthi kunye nabafundi bakho ngezicelo zobunjineli, ijiyografi, iinkqubo zolwazi lwendawo okanye i-cadastre. Ukongeza, ikhosi inenqanaba eliphambili elichaza unxibelelwano olwahlukeneyo lweGoogle Earth kunye neendawo zecadastre, iinkqubo zolwazi lwendawo kunye nobunjineli.
Ikhosi ibandakanya zombini idatha esetyenzisiweyo kwinkcazo (imifanekiso, iifayile ze-CAD, iifayile ze-GIS, iifayile ze-Excel, iifayile ze-KML), kunye nesoftware esetyenzisiweyo kwimithambo yokukhuphela umfanekiso kunye nokuguqula idatha.
Sebenzisa isixhobo seGoogle Earth kwizinto ezisisiseko
Thatha uhambo olukhokelwayo
Zulazula ngemilinganiselo emi-3
Ukubonisa umfanekiso kwiGoogle Earth
Khuphela imifanekiso efaniswe ngokungqinelana nomhlaba
Ngenisa kwiGoogle Earth CAD, GIS, idatha ye-Excel
Lungisa idatha kwiArcGIS nakwi-AutoCAD ukuze isetyenziswe kwiGoogle Earth
Iingcali ezivela kwiindawo zentlalo
Abasebenzisi beJografi kunye neenkqubo zolwazi lwejografi
Abasebenzisi besoftware yeCAD
Iikhosi-LandWorks Izifundo zikaGoogle Earth Umhlaba ka-Google